Miyuusikar muraayad Macdanta ayaa leh hal shay oo kiimiko ah
Macdanta waa shey kiimiko ah oo caadi ah, oo badanaa oo ah qaabka kristantineed oo aan soo saarin geedi socodka nolosha. Macdanta ayaa leh hal nooc oo kiimiko ah, halka dhagaxu uu noqon karo wadarta macdanta kala duwan. Sayniska macdanta ayaa ah macdanta.
Dhagaxyada intooda badani waa macdan
Macdanta waxay leedahay waxyaabo jireed oo kala duwan. Sharaxaada waxay kuxirantahay qaab dhismeedka kiimikada iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Sifooyinka guud ee lagu garto waxaa ka mid ah qaabdhismeedka madadaalada iyo caado, sidoo kale adkaanta, dhaldhalaalka, xiiqda, midabka, xariijimaha, adkeysiga, kala-goynta, jabka, kala-tagga, culeys gaar ah, magnetism, dhadhanka ama urta, shucaaca, iyo fal-celinta aashitada.
Dhaxmirka macdanta macdanta: Quartz, dheeman, corrundum, beryl, ...
Waxaa muhiim ah in la kala saaro muraayadaha sunta, iyo qaniinyada ama alaabooyinka la taaban karo.
GEMS synthetic waa muuqaal ahaan, muuqaal ahaan iyo kiimiko ahaanba dhagaxa dabiiciga ah, laakiin waxaa lagu sameeyay Warshad. Marka laga hadlayo ganacsiga, ganacsatada iibiya dhagaxaanta ayaa badanaa isticmaala magaca "shaybaarka la abuuray". Waxay ka dhigeysaa dhagaxa dardaaranka in laga suuq geyn karo "warshad la abuuray".
Dhaxmirka miraayadda synthetic: Dheemanka synthetic, dheemanka synthetic, quartz qalin, ...
Dhagaxyo dabiici ah
Tusaalooyinka dhagxaanta macmalka ah waxaa ka mid ah zirconia cubic, oo ka kooban zirconium oxide iyo moissanite la moodo, oo labaduba ah jilitaanno isku mid ah. Ku dayashada ayaa nuqul ka dhigeysa muuqaalka iyo midabka dhagaxa dhabta ah laakiin ma lahan astaamo kiimiko iyo mid muuqaal ahaanba. Moissanite runti wuxuu kahelaa jaantus ka roon dheemanka marka la hordhigo dheeman u dhigma oo la jaray wuxuu yeelan doonaa "dab" ka badan dheeman
Dhagax waa walax dabiici ah, wadajir adag oo hal ama in ka badan macdanta ama macdanaha. Tusaale ahaan, Lapis lazuli waa dhagax metamorphic buluug oo qoto dheer. Qaybinta waa dhagax qiimo leh. Qaybta macdanta ugu muhiimsan ee lapis lazuli waa lazurite (25% ilaa 40%), macdanta feldspathoid silicate.
Dhuxulo dabiici ah
Waxaa jira tiro ka mid ah walxaha dabiiciga ah oo loo isticmaalo guntinta, oo ay ku jiraan:
Amber, Ammolite, Lafaha, Copal, Coral, Ivory, Jet, Nacre, Operculum, Pearl, Petoskey dhagax
Macdanta macaanku waa walax macdan oo kale ah oo aan soo bandhigin crystallinity. Mineraloids waxay leeyihiin waxyaabo kiimiko ah oo kala duwan oo ka baxsan kala duwanaanta guud ee la oggol yahay ee macdanta gaarka ah. Tusaale ahaan, obsidian waa muraayad qurux badan oo aan lahayn kiriim. Jet waxaa laga soocaa alwaax qashinka ku jira cadaadis daran. Opal waa macdan yar oo kale sababtoo ah dabiiciga aan kiniinka ahayn.
Mankoollada Man-ka samaysan
Muraayadda wax sameysay, caag ah, ...